ရှန်ဒေါင်း Gongxian Gmengyuan Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Ltd. , ရှန်ဒေါင်း Gongxiang Mengyuan ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ, စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ၏နက်ရှိုင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အထူးပြုထားတဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 21 ရာစုမှာတော့ဒါဟာအရှေ့တောင်အာရှ, အာရှအလယ်ပိုင်း, အနောက်အာရှ, အာဖရိကမြောက်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ဥရောပအစေခံရန်တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များခွင့်ပြုပါရန် "ရေကြောင်းပိုးလမ်းမ" ၏ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်ပါတီဗဟိုကော်မတီရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ရှန်ဒေါင်း Gongxiang Mengyuan ထရေးဒင်း Co. , Ltd ကွန်းဖြူးရှပ်ဝါဒ, ကွန်ဖြူးရှပ်၏ဇာတိမြို့, Jinan ရှန်ဒေါင်း, တရုတ်၏တည်ထောင်သူတွင်တည်ရှိသည်။ Jinan ၏မြို့ 72 စမ်း၏အမည်များ, တိုင်းမိသားစုနွေဦးရေ, လှပသောရှုခင်းနှင့်အတူ, မိုးမခငိုကြွေးခြင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်ကမ္ဘာကျော်ကြားပါတယ်။ ကဲ့သို့သောအထူးစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်၏နက်ရှိုင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့အတူကုမ္ပဏီအဓိကအားဖြင့်အပေးအယူ: ငရုတ်ကောင်း, ငရုတ်သီးဆော့စ်ထုတ်ကုန် spiced ရာသီထုတ်ကုန်အေးစက်နေတဲ့ပဲပိစပ်ထုတ်ကုန်, စည်သွတ်အသီးထုတ်ကုန် hawthorn ထုတ်ကုန်, ကြက်သွန်ဖြူထုတ်ကုန်ဆီးထုတ်ကုန်, နက်ရှိုင်း-ဖြစ်စဉ်ကိုကြက်သားနက်ရှိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြဲ "ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှာလမ်းညွှန်အဖြစ်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကို ယူ. , နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိယူနှင့်၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်-Win win" ဘုံဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှာ၏လူသားဝါဒဝိညာဉျကိုမှလိုက်နာစောင့်ထိန်း။
Vision ၏တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်မစ်ရှင်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုသုည-အကွာအဝေးပလက်ဖောင်း Build: စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တင်ပို့စက်မှုလုပ်ငန်း၏လမ်းညွှန်နှင့် Practitioner ဖြစ်လာစေရန်နှင့်ကွန်းဖြူးရှပ်ဝါဒယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများများဖြန့်ဝေမြှင့်တင်ရန်: Lilliput မှစ. လူ့ကျန်းမာရေးတစ်ခုအဝန်းတည်ဆောက်ခြင်းမှ ကြမ္မာ
Adress: ROOM တွင် 1-101-1, 11, Hailiangyuanli, အမှတ် 717 တည်ဆောက်ခြင်း, Fengming လမ်း, ဘိုရှန်လမ်း, Licheng ခရိုင်, Jinan စီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
E-mail ကို: gxmy1978@163.com